Beesha caalamka oo sheegtay in 60% qarashaadkii doorashada Soomaaliya ay bixiyeen – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Beesha caalamka oo sheegtay in 60% qarashaadkii doorashada Soomaaliya ay bixiyeen
War-qoraal ah oo si wadajir ah usoo saareen Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Midowga Yurub, Urur goboleedka IGAD, Boqortooyada Ingriiska, Jarmalka, Mareykanka, Norway, Sweden iyo Talyaaniga ayaa lagu sheegay in la bixiyay 60% lacagtii ku bixi lahayd doorashada Soomaaliya ka dhici doonta bishaan September iyo October.
Qoraalkaasi ayaa sidoo kale lagu sheegay inay muhiim tahay in hore loo sii amba-qaado howlaha doorashooyinka Soomaaliya, islamarkaana aan lagu mashquulin waxyaabaha dib-u-dhac ku keeni kara qabsoomidda doorashooyinkaas.
Waxaa sidoo kale madaxda dowladda federaalka Soomaaliya loogu baaqay inay ilaaliyaan waqtiga doorashada, waxayna madaxda beesha caalamka ku taliyeen in doorashada Aqalka Sare, Aqalka Hoose iyo tan madaxweynaha ay muhiim tahay inay ku dhacdo waqtigii loogu tala galay.
Dhinaca kale, Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating ayaa sheegay in Soomaaliya ay haatan galeyso marxalad kala duwan, sidaasi darteedna loo baahan yahay in si wadajir ah looga qeyb qaato howlaha doorashooyinka.
Qoraalkaan ay soo saareen beesha caalamka ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda federaalka Soomaaliya horey usoo bandhigtay miisaaniyadda lacagaha ku bixi doona doorashooyinka dalka oo lagu wado inay dhawaantaan qabsoomaan, taas oo u muuqata mid aan ku filneyn qarashaadkaas.